संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीका कडा कुराः संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दा किन बिरोध ? - Everest Dainik - News from Nepal
संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीका कडा कुराः संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दा किन बिरोध ?
काठमाडौं, वंशजका आधारमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रका विषयमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले प्रष्टिकरण दिएका छज् । व्यवस्थापिका सदनको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राईले कानुनसम्मतरुपमा नै नागरिकताबारे परिपत्र दिएको दावी गरे ।
विधी र प्रक्रियाको आधारमा नै परिपत्र गरेको दुबैको भनाई थियो । गृहमन्त्री थापाले कुनै पनि नागरिक नागरिकता लिनबाट बञ्चिन नहुन भन्ने उद्धेश्यले सबै जिल्लामा परिपत्र गरेको बताए । संसदमा छलफल नै नगरी परिपत्र जारी गरिएकोमा व्यक्त गरिएको आपत्तीप्रति लक्षित गर्दै थापाले संसद र संसदीय समिति सर्वोपरी भएपनि जनताको हक अधिकारलाई ध्यानमा राखेर परिपत्र गरेको बताए ।
संविधानको धारा ११ र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका आदेशलाई आधार मानेर जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको उनको भनाई थियो ।